Baro Sharciyada Jaceylka U Yaalo Si Dhameystiran Iyo Calaamadaha Dhunkashada. - iftineducation.com
iftineducation.com – Xaalado badan ayaa leh calaamado lagu garto iyo sharciyo loo raaco marka lagu jiro. Jacaylka oo ah xaalad dadku galaan ayaga oo og ama aan ogayn, ayaa isna waxa uu leeyahay calaamado iyo sharciyo. Hore ayaan uga sheekaynay calaamadaha jacaylka, maantana waxa aan idiin haynaa sharciyada jacaylka.
Hadaba halkan hoose ayey shabakada kobciye.com kugu soo bandhigtay sida aad u dhaqmaysid marka aad la socotid seeygaaga ama xaaskaaga.
Waxaa dhacday in hala isku heeso dadka qaar si kale u fahmaan sida maqaalkii shalay ka baxay shabakada kobciye.com oo aan ku arkeynay fikradaha qaar.
Hala isku heeso ama u hees lamaanahaada lagama wado hees music leh ee waxaa laga wadaa hees qoran ama geeraar jaceyl u tiri, waxaan filayaa hada in aad fahanteen, intii aan horay u fahmin
Faah Faahin: Soomaalida Islii oo kala carar ku jirta iyo ciidamada oo gur guri ubaaraya